Ivan Rakitić oo fariin laab qaboojin ah u diray jamaahiirta kooxda Barcelona – Gool FM
Ivan Rakitić oo fariin laab qaboojin ah u diray jamaahiirta kooxda Barcelona
(Barcelona) 22 Agoosto 2018. Ivan Rakitić ayaa soo xiray suurtogalnimada ah inuu ka tago kooxda Barcelona, maadaama ay dhawaanahan soo baxeen warar ku aadan in uu yabaooh kaga yimid kooxda Paris Saint-Germain.
Laacibka reer Croatia ayaa wuxuu fariin u diray jamaahiirta kooxda reer Catalonia, wuxuuna cod dheer ku sheegay inuu doonayo sii joogista garoonka Cump Nou.
Wargeysa “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Ivan Rakitić uu ku adkeysanayo inuu sii joogo kooxda Barcelona kadib markii uu bartiisa Inistigram-ka soo dhigay “Barca ha noolaato”.
Fariintan uu soo dhigay Ivan Rakitić bartiisa Inistigram-ka ayaa wuxuu jawaab cad kaga bixiyay wararka ku aadan inuu u dhaqaaqayo kooxda reer France ee kooxda Paris Saint-Germain.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka, ciyaaryahanka reer Croatia ayaa doonaya inuu sii joogo kooxda heysata horyaalka Spanish, waxaana qandaraaskiisa kooxda uu dhacayaa sanada 2021, waxaana markii ugu dambeesay uu cusubooneesiiyay ay ahayd bishii March 2017.
Robert Lewandowski oo daaha ka qaaday sababta uu u doonayo ka tagista kooxda Bayern Munich
Go’aanka kooxda Manchester United oo ku dhiiragalineysa Anthony Martial inuu sii joogo Old Trafford